Thelọ ihe nkiri dị n'ọbara. Enyi enyi m, onye omee na onye nduzi Mari Carmen Rodríguez. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Thelọ ihe nkiri dị n'ọbara. Enyi m dere, omee na onye nduzi Mari Carmen Rodríguez.
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ndị edemede, Aterlọ ihe nkiri
Tower nke chọọchị Santa Katalina. La Solana (Ciudad Real). Foto nke (c) Mariola Díaz-Cano.
Taa ị ga - ahapụ m ka m hapụ nyocha, mmemme, akụkọ ma ọ bụ nyocha nke nnukwu akwụkwọ ụnyaahụ, taa na echi. N’oge Ista gara aga, mmadụ na-aga obodo ya na ọ na-ejikọtakwa ndị enyi ya ka nọ obere oge. .B. otu n'ime ndị enyi ahụ, malitere kemgbe nwata, a raara edemede a nye.
Na-eyi ihe nkiri n'ime ọbara na ịbụ onye edemede, onye na-eme ihe nkiri na onye nduzi nke ọrụ ya, na mgbakwunye na imeghari ma ọ bụ na-ekere òkè na ndị ọzọ. Dị ka ikpe gị, a ga-enwekwa ọtụtụ ndị ọzọ. Anonymous playwrights si ọtụtụ ebe ndị ọzọ, amaghi ọha na eze ma ukwuu ghọtara site na ha. Ihe omuma dika o nweghi onye nzuzu nke obodo na ndi bi n'ime ya na ndi nwere ike igosiputa ya ma gosiputa ha n'olu ato. Dị ka Mari Carmen Rodríguez. Ọ na-aga maka ha niile.
4 Ya mere ...
Amaara m Mari Carmen kemgbe anyị dị afọ asaa m wee bata dịka nwa akwụkwọ ọhụrụ n’ụlọ akwụkwọ San Luis Gonzaga n’obodo m. Ka anyị kwuo nke a obere oge gara aga. N'oge ahụ, na ịbụ onye ọhụụ, ọ ga - eme ka ọ gbanwee, zute ụmụ agbọghọ ndị ọzọ ma nwee ndị enyi mbụ. Na San Luis Gonzaga adịghị agwakọta mgbe ahụ ma na-agba ọsọ n’aka ụmụ Nwanyị Charity. Ihe ncheta mbụ nke ọma nke ya bụ ndị 3º nke EGB na-ekiri ka o na-ede na mbadamba mgbe ezigbo Nwanne nwanyị ahụ Emilia mere ka anyị pụọ. Mari Carmen bụ eme aka ekpe ọ masịrị m ịhụ ya.
Mgbe e mesịrị, na-egosi ma obi ike onwe onye ma ihe okike, maka nnọkọ ụlọ akwụkwọ na ekeresimesi ma ọ bụ na njedebe nke afọ, Mari Carmen na-ahụ maka ide edemede nke aka ya. Ọzọkwa, M họọrọ nkedo nke anyị chọrọ isonye na nyere anyị ihe odide ndị ahụ kpọmkwem dị ka àgwà anyị si dị (na ọdịdị). N'ezie, ọ duziri anyị ma debekwa ọrụ nke abụọ ma buru ibu.
Ọ na-enye m ọrụ nke nwa nwoke mara mma ma dị mma bụ enyi nwoke, enyi ma ọ bụ nyere aka na protagonist. N'ihi na n'ezie lCharactersmụ nwoke na-agụ akụkọ anyị mere ka ha dị ka ndị gboo Greek mana na agbara. Naanị m nwere obi ụtọ iji ihe mkpuchi na-agba ọkụ gbaa afụ ọnụ ma tinye jaket na tie site n'aka nna m. Na m nwetakwara onye nzuzu otu ahụ bụ ahịhịa ọka ikpeazụ.
Aha m ka na-echeta otu n’ime ọrụ ndị ahụ bụ Nsi megide nsi, nke na-ekwu ọtụtụ ihe banyere ihe nwere ike ịga. A na-enwekarị ihe omimi, mpụ ma ọ bụ mmejọ na, ndammana, mechara biri na nke ọma.
Site na nkọwa n'ime ọbara ya, ana m ekwusi ike na ikike Mari Carmen na-aga n'ihu na-ede ọrụ nke aka ya, na-eduzi ma na-atụgharị ha, ugbu a na ụlọ ọrụ ihe nkiri nke ya, Na colosseum akpu, n'ime mkpakọrịta AFAMMER (Association of Family and Rural Women), nke ya oche. Na mgbakwunye, ọ bụ akụkụ nke ụlọ ọrụ ihe nkiri solanera Margarita Xirgu.
Na ụlọ ọrụ Margarita Xirgu.
Atrabilisnke Laila Ripoll dere. Ọ na-egwuri egwu na-ekwo ekwo aha ya bụ Daria.
Green taịl. Akaraka. Otu usoro ihe odide katọrọ mmekpa ahụ emere na Chile n'oge Pinochet. Ọ bụ Tell-akụkọ.
Dams, nke Ignacio del Moral na Verónica Fernandez dere. Apụrụ m ịhụ ya ka ọ na-eji aka ya atụgharị Mari Cruz onye nnupụisi ahụ.
Bernlọ Bernarda Alba, nke si Lorca, ebe Martirio nọ.
Ụfọdụ ịhụnanya nke na-adịghị egbu egbunke Dulce Chacón dere. Monologues megide okike nwoke na nwanyi.
Na Association AFAMMER:
Sainetes nke umunne Alvarez Quintero dika Obere ụlọ nke otu awa, Ọbara abụba, Quarrels na ihe omume ịhụnanya.
Abụ m nwoke, de Carlos Arniches.
Okwu na ajanke Antonio Buero Vallejo dere.
Ọrụ nke egosiputala:
Ime ụlọ 204.
Mgbanwe nke Zarzuelas dị ka Ogige Fero, Ngwa nke nduru, Refeyim na nnukwu isi o Ndị ọgaranya na ndị ekweghị na Chineke ndi Arniches.
Ya mere ...
…Kedu Ihe osise a bụ ihe mmụọ nsọ na nnabata maka ndị edemede niile dịka ya. Karịsịa ihe ọ pleasureụ ọ bụla ịnọgide na-adabere na ọbụbụenyi gị. Anyị nwere ike mechaa mee ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Aterlọ ihe nkiri » Thelọ ihe nkiri dị n'ọbara. Enyi m dere, omee na onye nduzi Mari Carmen Rodríguez.
Ederede ndị ọzọ dị ka nke a iji mata ndị nwere mmasị na nka na mmesapụ aka nke ndị ukwu! Ole maka Carmen! Ekele diri gi, Mariola, mee ka anyi mara
Emehie mmejọ mgbe nile mgbe anyị na-ede akwụkwọ anyị
Etu esi wuo ndi edemede